लूका ४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
४ तब येशू पवित्र शक्तिले भरिएर यर्दन नदीबाट जानुभयो र पवित्र शक्तिले उहाँलाई उजाडस्थानतर्फ डोऱ्यायो, २ जहाँ उहाँले चालीस दिन बिताउनुभयो। तब दियाबलले* लोभ देखाएर उहाँको परीक्षा गर्ने कोसिस गऱ्यो। ती दिनमा उहाँले केही खानुभएन। त्यसैले ती दिन बितेपछि उहाँ भोकाउनुभयो। ३ दियाबलले उहाँलाई यसो भन्यो: “यदि तपाईं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गा रोटी भइजाओस् भन्नुहोस्।” ४ तर येशूले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो: “यस्तो लेखिएको छ, ‘मानिस रोटीको भरमा मात्र बाँच्नुहुँदैन।’ ” ५ त्यसैले दियाबलले उहाँलाई अग्लो ठाउँमा लग्यो र छिनभरमै संसारका सबै राज्य देखायो ६ र उहाँलाई भन्यो: “म यी सबै राज्यको अख्तियार अनि त्यसको गौरव तपाईंलाई दिनेछु। किनकि ती मलाई दिइएका छन्‌ र जसलाई इच्छा लाग्छ, म उसैलाई दिन्छु। ७ त्यसैले तपाईंले मलाई एक चोटि ढोग्नुभयो भने यी सबै थोक तपाईंकै हुनेछ।” ८ येशूले त्यसलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “यस्तो लेखिएको छ, ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ अनि उहाँलाई मात्र पवित्र सेवा चढाउनुपर्छ।’ ” ९ त्यसपछि त्यसले उहाँलाई यरूशलेममा लग्यो र मन्दिरको पर्खालको टुप्पोमा राख्यो र उहाँलाई भन्यो: “तपाईं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हामफाल्नुहोस्; १० किनभने यस्तो लेखिएको छ, ‘तपाईंलाई जोगाउन उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई हुकुम गर्नुहुनेछ’ ११ र ‘उनीहरूले तपाईंलाई हातहातै बोक्नेछन्‌, ताकि तपाईंको खुट्टा ढुङ्गामा नबजारिओस्।’ ” १२ येशूले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो: “यस्तो भनिएको छ, ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरको परीक्षा लिनुहुँदैन।’ ” १३ यसरी सबै परीक्षा गरिसकेपछि अर्को अनुकूल मौका नपाउन्जेलसम्मका लागि दियाबलले उहाँलाई छोडेर गयो। १४ तब येशू पवित्र शक्तिले भरिएर गालील फर्कनुभयो। अनि वरपरका सबै इलाकाहरूमा उहाँको कीर्ति फैलियो। १५ साथै, उहाँले सभाघरहरूमा* सिकाउन थाल्नुभयो र सबैले उहाँको आदर गर्थे। १६ अनि उहाँ आफू हुर्केको सहर नासरत जानुभयो र त्यहाँ आफ्नो आदतअनुसार विश्राम-दिनमा* सभाघरभित्र पस्नुभयो र धर्मशास्त्र पढ्नलाई उभिनुभयो। १७ उहाँलाई भविष्यवक्ता यशैयाको मुठा दिइयो र उहाँले मुठा खोल्नुभयो अनि यस्तो लेखिएको ठाउँ फेला पार्नुभयो: १८ “यहोवाको पवित्र शक्ति ममाथि छ। किनकि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई यसकारण पठाउनुभएको छ, कि मैले कैदीहरूले पाउने मुक्ति र अन्धाहरूले पाउने दृष्टिबारे प्रचार गरूँ, पिल्सिएकाहरूलाई छुटाऊँ, १९ अनि यहोवाको निगाह पाउने समयबारे प्रचार गरूँ।” २० त्यसपछि उहाँले मुठा बेरेर सेवकलाई फिर्ता दिनुभयो र बस्नुभयो। सभाघरमा हुनेजति सबैले एकटक लगाएर उहाँलाई हेरिरहेका थिए। २१ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो: “तिमीहरूले भर्खरै सुनेको धर्मशास्त्रको यो अंश आज पूरा भयो।” २२ अनि तिनीहरू सबैले उहाँको तारिफ गरे र उहाँले बोल्नुभएका मनमोहक वचन सुनेर तिनीहरू छक्क परे अनि यसो भन्न थाले: “के यिनी यूसुफका छोरा होइनन्‌ र?” २३ तब उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “तिमीहरूले पक्कै पनि मलाई यो उक्ति सुनाउनेछौ, ‘ए डाक्टर, पहिले आफैलाई निको पार।’ अनि त्यसलाई ममाथि लागू गर्दै यसो भन्नेछौ, ‘तिमीले कफर्नहुममा गरेका कामहरूबारे हामीले जे सुन्यौं, ती यहाँ आफ्नो गृहनगरमा पनि गर।’ ” २४ तर उहाँले भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, कुनै पनि भविष्यवक्तालाई उसको आफ्नै गृहनगरमा स्वीकार गरिंदैन। २५ उदाहरणको लागि, एलियाको पालामा साढे तीन वर्षसम्म पानी नपरेर सारा देशभरि ठूलो अनिकाल परेको बेला इस्राएलमा थुप्रै विधवा थिए। २६ तर परमेश्वरले एलियालाई यी स्त्रीहरूमध्ये कसैकहाँ नपठाएर सीदोनको सारपतमा बस्ने विधवाकहाँ मात्र पठाउनुभयो। २७ साथै, भविष्यवक्ता एलिशाको पालामा इस्राएलमा थुप्रै कुष्ठरोगी थिए, तैपनि सिरियाको नामानबाहेक अरू कसैलाई शुद्ध पारिएन।” २८ तब सभाघरमा बसेर यी कुरा सुनिरहेका सबै जना रिसले चूर भए। २९ अनि तिनीहरूले उहाँलाई हतारपतार सहरबाहिर पुऱ्याए अनि उहाँलाई उँधोमुन्टो पारेर भीरबाट खसाल्न आफ्नो सहर बसालिएको डाँडाको टुप्पोतिर लगे। ३० तर भीडलाई छिचोल्दै उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। ३१ त्यसपछि उहाँ गालीलको कफर्नहुम सहरतिर ओर्लनुभयो। अनि विश्राम-दिनमा तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। ३२ उहाँको सिकाउने तरिका देखेर तिनीहरू छक्क परे, किनकि उहाँ अख्तियारका साथ बोलिरहनुभएको थियो। ३३ दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको एक जना मानिस पनि त्यही सभाघरमा थियो र ऊ यसो भन्दै चिच्याउन थाल्यो: ३४ “ए नासरी येशू, तपाईंको हामीसित के सरोकार?* के तपाईं हामीलाई नाश गर्न आउनुभएको हो? तपाईं वास्तवमा को हुनुहुन्छ, मलाई थाह छ। तपाईं परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ।” ३५ तर येशूले त्यसलाई हप्काउँदै भन्नुभयो: “चूप लाग् र ऊबाट बाहिर निस्केर आइज।” तब त्यस दुष्ट स्वर्गदूतले उसलाई सबैको अगाडि पछाऱ्यो र उसलाई कुनै चोट नपुऱ्याई बाहिर निस्क्यो। ३६ यो देखेर सबै जना तीन छक परे अनि यसो भन्दै आपसमा कुरा गर्न लागे: “हेर त, उहाँको वचनमा कत्ति तागत रहेछ! किनकि उहाँ दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई अख्तियार अनि शक्तिका साथ हुकुम गर्नुहुन्छ र तिनीहरू बाहिर निस्कन्छन्‌।” ३७ यसरी वरपरका सबै इलाकाहरूको कुनाकाप्चासम्म उहाँको विषयमा चर्चा हुन थाल्यो। ३८ सभाघरबाट निस्केपछि उहाँ सिमोनको घरभित्र पस्नुभयो। त्यतिखेर सिमोनकी सासूलाई निस्लोट ज्वरो आएको थियो। त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई तिनको विषयमा बिन्ती गरे। ३९ तब तिनको नजिकै उभिएर उहाँले ज्वरोलाई हट्ने आदेश दिनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छोड्यो अनि तुरुन्तै उठेर तिनी उहाँहरूको लागि खाना तयार गर्न लागिन्‌। ४० तब घाम अस्ताउँदै गर्दा, विभिन्न किसिमका रोगले ग्रस्त आफ्ना मानिसहरूलाई लिएर सबै जना उहाँकहाँ आए। अनि उहाँले तिनीहरू हरेकमाथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नुहुन्थ्यो। ४१ अनि दुष्ट स्वर्गदूतहरू पनि यसो भनेर चिच्याउँदै थुप्रै मानिसबाट निस्कन्थे: “तपाईं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ।” तर उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुन्थ्यो र बोल्न दिनुहुन्नथ्यो किनभने उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी तिनीहरूलाई थाह थियो। ४२ उज्यालो भएपछि उहाँ निस्केर एकान्त ठाउँतिर जानुभयो। तर मानिसहरू उहाँलाई धुइँधुइँती खोज्न थाले र उहाँ भएको ठाउँमा पुगे। अनि तिनीहरूलाई छोडेर उहाँ कतै नजाऊन्‌ भनी तिनीहरूले उहाँलाई रोक्न खोजे। ४३ तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले अरू सहरहरूमा पनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, किनकि म यसैको निम्ति पठाइएको हुँ।” ४४ त्यसैले उहाँ गएर यहूदियाका सभाघरहरूमा प्रचार गर्न थाल्नुभयो।
^ लूका ४:२ * ग्रीकमा “दियाबोलोस,” जसको अर्थ हो, “निन्दक।”
^ लूका ४:१५ * प्रार्थना गर्न र धर्मशास्त्र पढ्न यहूदीहरू भेला हुने ठाउँ।
^ लूका ४:१६ * मत्ती १२:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका ४:३४ * मत्ती ८:२९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।